မြို့မှာနေရင် အဆ.ဲခံနေရလို့ ရွာပြန်ပြေးခါမှ မိတ်ဆွေရင်းရဲ့ နောက်ကျောကနေယု.တ်.မ.ာခြင်း ကို ထိထိ မိမိခံစားနေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး – Shwe Yoe
မြို့မှာနေရင် အဆ.ဲခံနေရလို့ ရွာပြန်ပြေးခါမှ မိတ်ဆွေရင်းရဲ့ နောက်ကျောကနေယု.တ်.မ.ာခြင်း ကို ထိထိ မိမိခံစားနေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး
မင်္ဂလာပါ ချစ်လှစွာသော ပရိသတ်ကြီးရေ မြို့မှာနေရင် အဆ.ဲခံနေရလို့ ရွာပြန်ပြေးခါမှ မိတ်ဆွေရင်းရဲ့ နောက်ကျောကနေ ယု.တ်.မ.ာခြင်းကို ထိထိမိမိခံစားနေရကြောင်း ပြောပြလာတဲ့ ဖြူဖြူထွေး (ခေါ်) ဖြူဖြူပြေး – သရုပ်ဆောင်ဆယ်လီ
ဖြူဖြူထွေးကတော့ အကဗီဒီယိုကနေတဆင့် လူသိများလာခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်း ဟာသဗီဒီယိုတွေရိုက်ကူးပြီး အောင်မြင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကိုဗစ် ပထမကာလမှာ အနုပညာရှင်ကြီးတွေတောင် အလုပ်လက်မဲ့ဖြစ်နေချိန်မှာ ဖြူဖြူထွေးကတော့
ကြော်ငြာတွေဆ.က်.တို.က် ရို.က်ကူးခဲ့ရတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဖြူဖြူထွေးက အလှူအတန်းလည်းရက်ရောပြီး မကြာခဏဆိုသလို လိုအပ်တဲ့ပြည်သူတွေဆီ လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ လူထုလှုပ်ရှားမှုကြီး ပေါ် လာချိန်မှာတော့
ဖြူဖြူထွေးက အစပိုင်းမှာပါဝင်ခဲ့ပြီး နှုတ်ဆိတ်နေခဲ့တာကြောင့် ပရိသတ်တွေရဲ့ အပြင်းအထန် ဝေဖန်ခံခဲ့ရတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မလို့ဖြူဖြူထွေးက လိုင်းပေါ်က အတန်ကြာပျောက်သွားခဲ့ပြီး မွေးရပ်မြေ တောရွာမှာဘဲနေထိုင်
နေတာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ ဖြူဖြူထွေးက လူရင်းတွေရဲ့ သစ္စာဖောက်ခြင်းခံရတဲ့ အကြောင်း အခုလိုပြောပြလာပါတယ်။ ဖြူဖြူထွေးက “နောက်ကျောကို ဓ.ာ.းနဲ့ထို.းတို.င်း လှည့်ကြည့်လိုက် ကိုယ့်မိတ်ဆွေ ကိုယ်ခင်ရတဲ့သူတွေကြည်ဘဲ”
ဆိုပြီးဝမ်းနည်း စွာပြောပြလာတာဘဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလို ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုပေးကြတဲ့ ပရိသတ်တစ်ယောက်ချင်းစီတိုင်း ကျန်းမာပျော်ရွှင်သောနေ့ရက်များ ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ လေးစားစွာဖြင့် ခရက်ဒစ်.
မင်ျဂလာပါ ခဈြလှစှာသော ပရိသတျကွီးရေ မွို့မှာနရေငျ အဆ.ဲခံနရေလို့ ရှာပွနျပွေးခါမှ မိတျဆှရေငျးရဲ့ နောကျကြောကနေ ယု.တျ.မ.ာခွငျးကို ထိထိမိမိခံစားနရေကွောငျး ပွောပွလာတဲ့ ဖွူဖွူထှေး (ချေါ) ဖွူဖွူပွေး – သရုပျဆောငျဆယျလီ
ဖွူဖွူထှေးကတော့ အကဗီဒီယိုကနတေဆငျ့ လူသိမြားလာခဲ့ပွီးနောကျပိုငျး ဟာသဗီဒီယိုတှရေိုကျကူးပွီး အောငျမွငျခဲ့တာဖွဈပါတယျ။ ကိုဗဈ ပထမကာလမှာ အနုပညာရှငျကွီးတှတေောငျ အလုပျလကျမဲ့ဖွဈနခြေိနျမှာ ဖွူဖွူထှေးကတော့
ကွျောငွာတှဆေ.ကျ.တို.ကျ ရို.ကျကူးခဲ့ရတာလညျးဖွဈပါတယျ။ ဒါ့အပွငျ ဖွူဖွူထှေးက အလှူအတနျးလညျးရကျရောပွီး မကွာခဏဆိုသလို လိုအပျတဲ့ပွညျသူတှဆေီ လှူဒါနျးပေးခဲ့တာဘဲဖွဈပါတယျ။ လူထုလှုပျရှားမှုကွီး ပျေါ လာခြိနျမှာတော့
ဖွူဖွူထှေးက အစပိုငျးမှာပါဝငျခဲ့ပွီး နှုတျဆိတျနခေဲ့တာကွောငျ့ ပရိသတျတှရေဲ့ အပွငျးအထနျ ဝဖေနျခံခဲ့ရတာလညျး ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့မလို့ဖွူဖွူထှေးက လိုငျးပျေါက အတနျကွာပြောကျသှားခဲ့ပွီး မှေးရပျမွေ တောရှာမှာဘဲနထေိုငျ
နတောဖွဈပါတယျ။ ဒီနမှေ့ာတော့ ဖွူဖွူထှေးက လူရငျးတှရေဲ့ သစ်စာဖောကျခွငျးခံရတဲ့ အကွောငျး အခုလိုပွောပွလာပါတယျ။ ဖွူဖွူထှေးက “နောကျကြောကို ဓ.ာ.းနဲ့ထို.းတို.ငျး လှညျ့ကွညျ့လိုကျ ကိုယျ့မိတျဆှေ ကိုယျခငျရတဲ့သူတှကွေညျဘဲ”
ဆိုပွီးဝမျးနညျး စှာပွောပွလာတာဘဲဖွဈပါတယျ။ အခုလို ဝငျရောကျဖတျရှုပေးကွတဲ့ ပရိသတျတဈယောကျခငျြးစီတိုငျး ကနျြးမာပြျောရှငျသောနရေ့ကျမြား ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ လေးစားစှာဖွငျ့ ခရကျဒဈ.
ဘောင်းဘီတို ဖက်ရှင်လေးနဲ့ ​လှပလွန်း​​ ပြီးရင်ထဲမှာ ဘာညာဘာညာ ဖြစ်သွား​မေယ့်နေခြည်နွေးနွေး
ရုပ်ရှင်ထဲမှာ သမ္မတနေရာသရုပ်ဆောင်ရင်း အပြင်မှာပါ တကယ့်ယူကရိန်းသမ္မတဖြစ်လာ သူ မင်းသားဟောင်းဇီလင်စကီး